सरकारले गर्यो एक्कै पटक ४९ जना सहसचिवको सरुवा, को कहाँ पुगे ?
🕚 २०७८ मंसिर ९ - १७:२६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले एकै पटक ४९ जना सह–सचिवको सरुवा गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ४९ जना सह–सचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिमका सह सचिव इन्द्रदेव भट्टराई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । इन्जिनियरिङ सेवा कै अर्का सह–सचिव राजेन्द्र प्रसाद भण्डारीलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
संघीय माहिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (अतिरिक्त समूहका सह–सचिव भूपेन्द्र थापालाई सरकारले कर्णाली प्रदेशको लाकसेवा आयोगमा सरुवा गरेको छ । संघीय माहिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (अतिरिक्त समूह)का सह–सचिव नरेन्द्र कुमार रानालाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पुर्याइएको छ ।
संघीय माहिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (अतिरिक्त समूहका सह–सचिव रमेश अर्याललाई सरकारले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सरुवा गरेको छ भने संघीय माहिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (अतिरिक्त समूह)का सह–सचिव देवराज जोशीलाई राष्ट्रिय महिला आयोग पुर्याइएको छ ।
को कहाँ पुगे
सरकारले गर्यो एक्कै पटक ४९ जना सहसचिवको सरुवा
Previous articleएडीबीले नेपालको विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरणका लागि थप ७ अर्बको सहुलियत ऋण सहयोग गर्ने
Next articleबैंकिङ कसूरमा फरार महिला पक्राउ
सरकारले गर्यो एकै पटक १० सचिवको सरुवा, को कहाँ पुगे ?
🕚 २०७८ मंसिर १३ - २१:२२ मा प्रकाशित
अर्थ मन्त्रालयका ७३ उपसचिव सरुवा, को कहाँ पुगे ?
🕚 २०७८ अशोज २४ - १७:५५ मा प्रकाशित
गृह मन्त्रालयले गर्यो सीडीओहरूको सरुवा, को कहाँ पुगे (सूचीसहित)
🕚 २०७८ भदौ ३० - १९:३५ मा प्रकाशित